I-Tudor yavuka, uphawu lwaseNgilani Ukuhamba kwe-Absolut
UTudor wenyuka, intyatyambo yelizwe laseNgilani
daniel | | ENgilani
La Tudor Rose (ngamanye amaxesha kuthiwa yi-Union rose okanye ngokulula IsiNgesi uRose) ngumqondiso wesizwe waseNgilani ukusukela emva kwexesha eliphakathi. Le ntyatyambo ithatha igama layo kwi Indlu yaseTudor, ubukhosi obadibanisa izindlu ezintle zaseLancaster naseYork.
En los amakhaka emveli eNgilane, le rosi imelwe ngamagqabi amahlanu amhlophe (amele iNdlu yaseYork) kunye namahlanu abomvu (amele iNdlu yeLancaster). Nangona kunjalo, kwihlabathi leentyatyambo, I-Tudor rose ipinki, i-hue esisiphumo somxube we-rose ebomvu kunye ne-rose emhlophe.
1 Imvelaphi yezembali
2 UTudor wavuka: uphawu lwaseNgilani
3 Irose kude neNgilane
I-Tudor rose inegunya elinamandla lokomfuziselo njengoko limele ukuphela komnxeba Imfazwe yeRos, ungquzulwano olwaxhathisa ezona ntsapho zinegunya nezomeleleyo eNgilani ngenkulungwane ye-XNUMX.
Imfazwe yaphela ngokuphumelela kuka-Henry waseLancaster kwi Idabi laseBosworth Field (1485). Ophumeleleyo wazibhengeza njengokumkani ngegama lika UHenry VII, nangona emva konyaka wathatha umfazi wakhe U-Elizabeth waseYork, ngaloo ndlela simanya zombini ezi ntsapho kwaye senziwe uxolelwaniso. Ukubonisa lo manyano mtsha kwisimboli esinye, kwamkelwa umbala wemibala emibini (kamva wavuka epinki), ukusukela ngelo xesha ukubizwa ngokuba nguTudor rose okanye umanyano.
Ngaphandle kwembali, inyani engokwembali iyangqina ukuba ngexesha lemfazwe yamakhaya yase-English enegazi kuphela uphawu lwe-rose emhlophe lwalukho, olusetyenziswa yindlu yase-York. Kuyabonakala, I-rose ebomvu yamkelwa emva kokuphela kwembambano ngenjongo eyodwa yokudala uphawu olutsha. I-propaganda medium yexesha lokudibanisa umanyano lwesizwe kunye nokutywina amanxeba amadala.
I-Tudor Rose, isiphumo somanyano phakathi kwemifuziselo yeNdlu yaseLancaster (ebomvu ebomvu) kunye neNdlu yaseYork (i-rose emhlophe).
Ukususela ngoko, kwimbali yaseNgilani i-Tudor rose ibonakaliswe ngeendlela ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha njenge iphindwe kabini, abanye nge enye yeeroses ibeke kwenye Kwaye, ngesiqhelo, njengeyodwa ifosi yenyuka. Ukumelwa kwerosi enesithsaba kuyinto eqhelekileyo, njengophawu lobukumkani obumanyeneyo baseBritane.
UTudor wavuka: uphawu lwaseNgilani
Namhlanje, i-Tudor rose ithathwa njenge Isimboli esemthethweni yeNgilani, nangona ingeyiyo i-United Kingdom. Ngokwenyani, ilizwe ngalinye kwezine ezenza ilizwe lisebenzisa uphawu lwalo: EScotland unameva, Welsh ilike e EMantla eIreland I-shamrock, ekwaluphawu lweRiphabhlikhi yaseIreland.
I-Tudor rose ifunyenwe kwisimboli esisemthethweni se-Guardians ye Inqaba yaseLondon kunye nomzimba wabalindi bakaKumkanikazi. Ikwavele iminyaka emininzi kwi-reverse ye Ngama-20 eedenariyo. Ewe kunjalo, uhleli nezitulo idyasi yeengalo zase-United Kingdom kunye INkundla ePhakamileyo kweli lizwe.
Ukongeza koku, abalandeli be umbhoxo Bazi kakuhle ukuba inyunyana inyukile ikhona kwiihempe zabadlali beqela lesizwe laseNgilane.
Abadlali beqela lombhoxo lesiNgesi, kunye nerose esifubeni
Iidolophu nezixeko ezininzi zamaNgesi ziyazingca ngokuzinxiba IsiNgesi uRose kwiimpawu zakho zendawo. Enye yezona zaziwa kakhulu yile ISutton Coldfield, kufutshane neBirmingham, apho uHenry VIII ngokwakhe wanika iwonga leCiudad Real. I-Tudor rose ikwabonakala nakwingubo yedolophu yaseyunivesithi Oxford.
Ngokufanayo, kufanele kuqatshelwe ukuba i-rose isetyenziswa kuwo onke amaxwebhu nakwiindawo ze I-ofisi yezokhenketho eNgilani (Ndwendwela iNgilane), nangona uyilo lwe-monochrome.
Irose kude neNgilane
Kodwa ikwangumbutho odumileyo womanyano uvela kwezinye iindawo kude neNgilane. Umzekelo, isithili kunye nommandla we IiQueens kwisiXeko saseNew York, Unxibe i-Tudor rose kwiflegi yayo nakwitywina elisemthethweni. Kwakhona ibhena ye Annapolis eMaryland, ibonisa iTudor yavuka ecaleni kwameva aseScotland, omabini abotshwe sisithsaba.
Ngaphandle kokushiya iUnited States, kukho enye Umdla kwimbali kunye nokuma komhlaba kwi-South Carolina. Apho sinokufumana idolophu ebizwa York, eyaziwa njenge «sixeko se-rose emhlophe». Nje ngeekhilomitha ezingama-50, usiya emzantsi-mpuma kwaye ngaphandle kokushiya urhulumente, kukho enye idolophu enegama Lancaster. Kwaye isiteketiso sale dolophu, ewe, "sisixeko esibomvu."
Okokugqibela, sinokuyifumana iTudor rose kwifayile ye- idyasi yeengalo zaseKhanada, intsalela yexesha lobukoloniyali laseBritane eliye lanyamezela ngokuhamba kwexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » UTudor wenyuka, intyatyambo yelizwe laseNgilani
IAurora Borealis eDenmark
UMedusa, lowo eneenyoka entloko